Nhau - Genius inosanganisa Shimano Di2 uye SRAM hydraulic zvinoriumba
Genius inosanganisa Shimano Di2 uye SRAM hydraulic zvinoriumba
Unoitei iwe kana bhizimusi bhasikoro risingakwanise kugadzira zvikamu zvinosangana nezvinodiwa zvako chaizvo? Kana iwe uri mainjiniya ekugadzira uye pneumatic nyanzvi Paul Townsend, iwe unozogadzira zvako zvigadzirwa uye woba zvikamu kubva kumakwikwi akwikwidza.
Paul akataura nezve mashandiro etekinoroji yemugwagwa akafa-magumo (ane hydraulic rim mabhureki) neake akasarudzika SRAM-Shimano hacker foto, isu tinofanirwa kudzidza zvakawanda.
Pakutanga kwekutanga kwe2016, musika weboka remugwagwa wakaratidzika wakasiyana zvakanyanya kubva zvino. Shimano haisati yatanga dhizaini yayo yeDura-Ace R9170 uye Di2 combo kit (isiri-akateedzana R875 joysticks uye mabhureki anoenderana ndiwo ega sarudzo dzemagetsi / Di2), uye SRAM's Red eTap HRD ichiri nemwedzi kure.
Paul aida kushandisa hydraulic rim mabhureki pabhasikoro rake remugwagwa, asi haana kugutsikana neMagura brake calipers.
Lever yaSRAM ine hydraulic rim brake ine zvakawanda zvinoderedzwa. Iye anofarira Shimano Di2 gearbox, saka akafunga kusanganisa iwo maviri kuita rakasarudzika DIY mashup.
Izvi zvinosanganisira kufambisa bhureki remabhureki uye switch bhatani gungano uye zvine chekuita nemagetsi zvigadzirwa kubva paseti yeDi2 joystick kuenda kuSRAM hydraulic mugwagwa joystick muviri.
Iyo SRAM hydraulic system inoramba isina kuchinjika, asi inoshandiswa neShimano lever blades, uye giya shifting inonyatsoenderana neDi2.
Ndakabvunza Paul mimwe mibvunzo kuti udzidze zvakawanda nezve yake yakasarudzika setup: mashandiro ake, rake reinjiniya kumashure, uye zvinotevera. Mhinduro yaPaul yakagadziriswa nekureba uye kujekesa.
Tisati taenderera mberi, isu tinofanirwa kunongedza kuti kugadzirisa yako braking system munzira ipi neipi kunogona kukuvadza zvakanyanya, uye hatikurudzire kuti uite izvi. Kugadziriswa kwezvikamu kunowanzoitawo kuti garandi yemugadziri isashanda.
Kubva kuma1980, ndanga ndichichovha bhasikoro pandakanga ndichidzidzira meinjiniya kuCoventry Poly University. Panguva iyoyo ini ndaive neTopanga Sidewinder uye Mick Ives bhasikoro remakomo.
Ini ndashanda mukugadzira bhasikoro uye magadzirirwo etsika, uye ndave ndiri mainjiniya ekugadzira uye pneumatic nyanzvi kwenguva yakareba. Ndakagadzirisa mota nemabhasikoro kwemakore mazhinji.
Ini ndaive neCanyon Yekupedzisira muna2013 uye ndagara ndichifarira tekinoroji, saka kutanga ndakaiisa iyo Shimano Ultegra 6770 Di2 yekunze tambo yeboka.
Ipapo, ndakakwidziridza mabhureki uye ndikaedza Magura RT6 hydraulic rim mabhureki. Kutaura chokwadi, zvainetsa, uye zvainetsa kuisa nekuisa.
Ndakagadzira clutch derailleur yemudhudhudhu wangu wekumugwagwa uye ndakaisa iyo Formula RR clone disc brake pairi neDi2 shifting. Yakashanda zvakanaka, asi panguva ino, mutengo weSRAM HydroR hydraulic rim mabhureki uye levers paPlanet-X yaive yekuseka kuseka.
Mushure mekufunda kuti zvinoriumba zveSRAM zvinowirirana sei uye nekuziva nzvimbo inodiwa module yeDi2, ndakatenga HydroR rim brake ye £ 100. Gare gare, ndakatenga mamwe maseti mana kwandiri, mumwe wangu uye munhu muUnited States.
Munguva yakapfuura, ndakagadzirawo mavhiri uye Gravity Research Pipe Yekurota -style V mabhureki emidhudhudhu yangu ekumugwagwa, ndokuzoita mashup emamwe mabhasikoro.
Naizvozvo, zano redu nderekuti: hydraulic disc mabhureki ane akapfuma kubata uye mashoma mashoma. Maguras anorwadza uye anonyadzisa, saka kana ndichida kugadzirira bhasikoro remugwagwa ne hydraulic rim mabhureki, ndinogona kusarudza SRAM, asi ndinoda Di2.
Zvakaoma sei kusanganisa izvo zviviri? Mushure mekubvisa iyo yekumhanyisa shanduko mashandiro, pane hombe hombe muSRAM tsvimbo yemuviri, saka mhinduro ndeiyi: iri nyore kwazvo.
Ini ndakatenga yechipiri-ruoko 6770 Di2 giya levers. Nekuti iyo 11-kumhanyisa Ultegra 6870 Di2 chigadzirwa chitsva, vanhu vazhinji vatengesa zvisirizvo 6770 giya lever kukwidziridza [kukanganisa nekuti iyo 6770 inogona chaizvo kushandiswa ne6870 derailleur]. Ini ndinofunga ndakatenga peya yekuwedzera yeinosvika £ 50.
Kugadzirisa kwangu kunoshandisa iyo iripo pivot gomba muDi2 brake lever, uye inosundira simbi nepurasitiki nekukurumidza prototyping (3D yakadhindwa) zvikamu zveiyo yekutanga Di2 brake lever pane iyo brake master silinda, saka masimba echimiro haazove akakwirira kudaro. mumwe mubvunzo.
Ini ndakacheka chikamu chakawandisa kubva kumusoro kweiyo 6770 Di2 mubato, ndakaigadzira nemuchina, ndokuzoinamatira kune sintered inokurumidza prototyping nylon chikamu.
Ndakadzorera gomba kuti gomba rinyatsotsetseka uye nekukura chaiko. Nepende shoma, kana Shimano pfumbu-green green chipolishi mune ino kesi, ini ndakagadzirira kuunganidza zvese.
Iyi gadziriro haishandisi spare rod inodzosera chitubu kana E-clip kugadzirisa shaft, saka shaft inodonhedzwa uye yakakwenenzverwa kuti iwane countersunk screw ine musoro wakakura kupfuura pivot pini. Kamwe kana lever muviri uchinyurawo zvishoma, musoro unoputika.
Chitubu chinodzokedzana chinowedzerwa kubhureki tenzi humburumbira shaft kuti ipe simba rekudzoka kune lever.
Mushure meizvozvo, iyo chete shanduko yandakaita yaive yekuwedzera diki yekuchinjika-chikamu O-mhete kune yekare E-simbi groove yepivot pini kudzivirira iyo brake lever blade kubva kurira zvishoma.
Iyo Di2 tambo inowedzera mune iyo groove pazasi yepazasi yeiyo 3D yakadhindwa epurasitiki musoro weiyo brake lever, saka yakagadziriswa uye haizombomira kana kusakara.
Mushure mekubvisa nzira dzese dzekuchinja, nzira chete yekugadzirisa zvikamu zveSRAM ndeyekuisa ma grooves ekuisa tambo yeDi2. Iyo module yeDi2 yakagadzika nechidimbu chefuro munzvimbo iri kumashure.
Ini zvakare ndakamhanya yakatsemuka sprint shifter system, ichibatanidza yekare Dura-Ace 7970 Di2 switch kubva paSW-R600 yekukwira switch switch kune yemagetsi module, uye ese maswitch aive akabatana netambo yekuruboshwe. Tambo yakawedzeredzwa kuti ipe yakachena plug-in mhinduro, uye pandakamhanya iyo Canyon dombo rakabatanidzwa lever kubata setup, iyo Junction'A'Di2 bhokisi mune shaft yaive mairi.
Mabhureki ane titanium fittings uye mwenje mabhureki mabhureki mabhureki. Ivo akaiswa pane 52 cm furemu. Huremu hwese hwemavhiri epamberi i375g, huremu hwese hwemavhiri ekumashure i390g, uye huremu hwese hwemavhiri ekumashure i390g.
Ehe, ini ndoda kutaura kuti kwaive kubudirira. Ndakatengesa seti kune mumwe munhu muHong Kong, uyo akanditumirawo SRAM Red naDura-Ace kuti vaite iyi mashup.
Ndakatengesa imwe seti yemidziyo kune mumwe munhu muAustralia kuti ashandise pabhasikoro rake reTT, uye ndikatengesa chetatu kumunhu muUnited States, kuti ndikwanise kubhadhara zvese zvandinoshandisa.
Kana ndikabhadhara mutengo wakazara wezvese izvi, ichave iri njodzi huru. Zvakare, ini ndinogona kugara ndichidzorera zvikamu zveSRAM kuchitoro chemishini yekuchinja pasina matambudziko.
Pamwe ini ndinopa iye lever akasimba kudzoka chitubu. Ini ndinoda tambo yekukiya kumisa shanduko muhuwandu hwekufamba panguva yekutyaira, nekuti ini ndakabvisa zvachose brake adjuster uye ndikabvisa yekutanga tambo yekukiya.
Hongu, ndiri kugadzira kumwe kukwira dombo nekumhanyisa giya levers, uye ndiri kutsvaga kurongeka kwakasiyana uko kumberi giya lever ichave lever yekubatsira, senge zvigunwe zvechigunwe paCampagnolo giya lever.
Pfungwa yepakutanga yaive kurudyi-ruoko kumusoro uye kuruboshwe-ruoko pasi, uye ini ndichiri kuyedza kushandisa iyo lever blade.
Ini ndinogona kunamatira kune yakati sandara SRAM yakaputsa lever mashizha kana kushandisa Campagnolo, uyezve chengeta iyo SRAM lever mashizha ekumusoro derailleur giya bhokisi uye itsva levers kune yepamberi derailleur gearbox.
Izvi zvinofanirwa kureva kuti hakuzove nemisalignment kunyangwe kana wakapfeka magurovhosi, izvo zvinogona kunge zvichinetsa munguva yechando pasi peyakajairwa maShimano.
Ndatenda zvikuru Paul nekupindura mubvunzo wangu nekupa mifananidzo. Kuti uwane mamwe matipi nezvake, ndokumbirawo umutevere paFlickr ne Instagram, kana verenga zvaakatumira pasi pezita remota motorapido paFremu Weenies forum.
Matthew Allen (aimbove Allen) ndimakanika ane ruzivo uye nyanzvi muhunyanzvi hwebhasikoro. Anokoshesa magadzirirwo uye hunyanzvi dhizaini. Pakutanga aive Louis, aifarira mabhasikoro nemidziyo yega yega. Kwemakore, akaedza zvigadzirwa zvakasiyana zveBikeRadar, Cycling Plus, nezvimwe. Kwenguva yakareba, moyo waMateu waive weScott Addict, asi parizvino arikunakirwa nehunyanzvi hweRoubaix Nyanzvi uye ane hukama hwepedyo neGiant Trance e-MTB. Akareba 174 cm uye anorema 53 kg. Zvinotaridza kuti anofanira kunge ari nani pane kuchovha bhasikoro, uye akagutsikana.
Nekuisa yako ruzivo, unobvumirana neBikeRadar zvirevo nemamiriro uye zvakavanzika mutemo. Unogona kuzvinyoresa chero nguva.